Celebrity News Archives - CeleTrend
January 8, 2020 Celebrity 0
ပရိသတ်ကြီးရေ မော်ဒယ်လ်ရွှေမြင့်မိုရ်ကတော့ လတ်တလောမှာ ကြားသိရတဲ့ အဆိုတော်အစ္စဏီ ထောင်ဒဏ်(၇)နှစ် ချခံခဲ့ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူမအနေနဲ့ မတရားဘူးလို့ သူမအမြင်ကို လူမှုကွန်ရက်ကနေ တစ်ဆင့်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမအနေနဲ့ သဘောရိုးနဲ့ ရေးသားခဲ့သော်လည်း မီဒီယာတစ်ချို့က တစ်လွဲတွေ ရေးသားခဲ့ကြတာကြောင့် သူမအနေနဲ့ စိတ်ဆိုးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဟုတ်တာတွေလျှောက်ဖြန့်နေတယ် ငါမတရားဘူးပြောတာ ဥပဒေ […]
၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းကစတင် လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ သြစတြေးလျတောမီးဟာ အခုအချိန်ထိ မရပ်တန့်သေးပါ ဘူး။ အဲဒီအတွက် မီးသတ်သမားတွေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကြသလို ရှားပါးတိရိစ္ဆာန်တွေအပါအဝင် သန်းနဲ့ချီတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေလည်း သေကြေပျက်စီးကြရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် နိုင်ငံတကာက ဝိုင်းဝန်းကူညီနေကြသလို နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေကလည်း ကူညီလှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ အဲဒီလိုကူညီလှူဒါန်းကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ Thor မင်းသားအဖြစ်လူသိများတဲ့ […]
ရာဇာနေဝင်းအပြင်သိပ်မထွက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ဟေမာနေဝင်း
သရုပ်ဆောင်မင်းသားရာဇာနေဝင်းကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ပုံရိပ်ကနေပျောက်ကွယ်နေခဲ့တာကြာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါမှာတော့ သတင်းထောက်တွေက ပွဲတက်ရောက်လာတဲ့ ရာဇာနေဝင်းရဲ့ မောင်နှမဖြစ်သူ ဟေမာနေဝင်းကို မေးမြန်းခဲ့ရာမှ ဟေမာနေဝင်းက ရာဇာနေဝင်းရဲ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းကို ဖြေကြားလာခဲ့တာပါ။ ဟေမာနေဝင်းက ရာဇာနေဝင်းအနေနဲ့ နေသိပ်မကောင်းတဲ့အတွက် အမေဖြစ်သူက အပြင်သိပ်မထွက်ခိုင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြလာခဲ့တာပါ။ကျန်းမာရေးကအဓိကဖြစ်လို့ သူတို့အနေနဲ့ ကိုရာဇာ့ကိုသေချာဂရုစိုက်ပေးနေရတဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟေမာနေဝင်းကသူ့အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ကမ်းလှမ်းလာတာတွေရှိနေပေမယ့် အိုက်တင်လုပ်ရတာအဆင်မပြေတာကြောင့် လက်မခံဖြစ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ ဒီအင်တာဗျူး Video ဖိုင်လေးရဲ့အောက်မှာ […]
“ဘင်ဂျမင်ရဲ့သီဆိုယှဉ်ပြိုင်မှုကို ပွဲအထိသွားရောက်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ယုသန္တာတင်၊ ခင်လေးနွယ်နဲ့ သွန်းဆက်တို့ သူငယ်ချင်းတစ်စု”
ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့ မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ (၇)ပတ်မြောက်သီဆိုယှဉ်ပြိုင်မှုကိုတော့ မနေ့ညကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်(၅)ယောက်စလုံးက အကောင်းဆုံး သီဆိုယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ထက်တစ်ပတ် သီဆိုယှဉ်ပြိုင်မှုတွေအားကောင်းလာတာက အနုပညာရှင်တွေပါ ကိုယ်အားပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလာရောက်ဝန်းရံကြတဲ့ အထိပါ။ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအထဲမှာမှ ဘင်ဂျမင်ကတော့ ဆန်ကာတင်စာရင်းမဝင်ခင်ကတည်းက မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ သည်းသည်းလှုပ်အားပေးခြင်းကို ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း ဂရုတစိုက်နဲ့ မွေးနေ့အလှူ အစရှိတာတွေကို ပရိသတ်အင်အားနဲ့လုပ်ပေးခြင်းခံရသူတစ်ယောက်ပါ။ ဘင်ဂျမင်ကတော့ […]
သူမရဲ့ ပုံတူတက်တူးကို ရင်ဘတ်မှာ ထိုးခဲ့တဲ့ ပရိသတ်တစ်ဦးကြောင့် မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ ရွှေပိုးအိမ်
သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးလေး ရွှေပိုးအိမ် ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။သူမက အနုပညာကို ကြိုးစားလုပ်နေတဲ့ မင်းသမီးလေးပါ။ သရုပ်ဆောင်ပီပြင်ပြီး ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သူလေးပါ။ ရွှေပိုးအိမ်က သူမရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်ကလေးတွေကို သူမချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုမိုလေးရဲ့ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် […]
သရုပ်ဆောင် ဖြိုးငွေစိုး ကို ထမင်းဝအောင်စားထားလို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ ဦးကျော်ထူး ( ရုပ်သံ )
ဟာသသရုပ်ဆောင်ဦးကျော်ထူးကတော့ ပရိသတ်တွေကြားမှာ နာမည်ကျော်ကြားလှတဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းကို အပြည့်အဝရရှိထားသူပါ။ဦးကျော်ထူးဟာ ယခုကျင်းပနေတဲ့ The Mask Singer Myanmar မှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေကို ယက္ခဆိုတဲ့ဇာတ်ရုပ်နဲ့ သီဆိုဖျော်ဖြေကာ ဆယ်လီစုံထောက်တွေကို လှည့်စားခဲပါသေးတယ်။ ယခုရက်ပိုင်းဖြေဆိုခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့ ဦးကျော်ထူးက မင်းသားဖြိုးငွေစိုးကို ထမင်းဝအောင်စားထားဆိုပြီး ကြုံးဝါးလာခဲ့တာပါ။ဖြိုးငွေစိုးနဲ့ ဦးကျော်ထူးဟာ အလွန်ခင်မင်တဲ့ […]
ကိုယ့်သီချင်း ပျက်စီးသွားမှာကြောက်တယ်လို့ ပြောလာတဲ့ တေးရေးတေးဆိုဝေကြီး
ပရိသတ်ကြီးရေ Myanmar Idol Season-4 ရဲ့ Top-5 တွေရဲ့ ထင်ရှားကျော်ကြားတေးသီချင်းများနဲ့ သီဆိုယှဉ်ပြိုင်မှုက တော့ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ ။ ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားကျော်ကြားပြီး အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ တေးသီချင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက်တော့ ဒါဟာ စိန်ခေါ်မှုအကြီးကြီးလို့ဆိုရမှာပါ ။ မူရင်းအဆိုရှင်ရဲ့ သီချင်းကို ပျက်စီးမသွားအောင် ကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့အတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက် […]
“မင်္ဂလာ သက်တမ်း (၁၄)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားပြီဖြစ်ခဲ့ ခီမောင်နှံ”
ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတွေကို ဖန်တီးလေးလေ့ရှိတာကြောင့် နာမည်ကြီးလူကြိုက်များနေတဲ့ မင်းသားချော ဇဏ်ခီနဲ့ ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီတို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ ဒီနေ့ ဒီဇင်ဘာလ (၁၃)ရက်နေ့မှာတော့ မင်္ဂလာသက်တမ်း (၁၄)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇဏ်ခီကတော့ ဇနီးဖြစ်သူ ခရစ္စတီးနားခီရဲ့ပုံလေးနဲ့ အတူ “Happy Annie! We signed 14 years ago!!” ဆိုပြီး […]